IDenmark iphelisa zonke izithintelo ze-COVID-19 emva kokutshixeka kweentsuku ezingama-548
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseDenmark zokuPhula » IDenmark iphelisa zonke izithintelo ze-COVID-19 emva kokutshixeka kweentsuku ezingama-548
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuqala ezinzulwini zobusuku ngoSeptemba 10, intsholongwane ye-COVID-19 ayisachazwa njenge "sisifo esibi ekuhlaleni" ngurhulumente waseDenmark.
Abasemagunyeni baseDenmark babhengeza ukuba lo bhubhane uphantsi kolawulo.
Akukho manyathelo awodwa aya kusetyenziswa eDenmark ukujongana ne-COVID-19 ukuqala nge-10 kaSeptemba.
Abasemagunyeni baseDenmark baligcinile ilungelo lokuqinisa amanyathelo athile "ukuba ubhubhane uphinde wosongela imisebenzi ebalulekileyo eluntwini".
Amagosa aseburhulumenteni waseDenmark abhengeze ukuba ukuqala nge-12: 00 kusasa nge-10 kaSeptemba, intsholongwane ye-COVID-19 ayisachazwa njenge "sisifo esibi ekuhlaleni" kweli lizwe, kwaye akukho manyathelo awodwa aya kusetyenziswa ukumelana ne-coronavirus ngaphakathi kwemida yaseDenmark.
Yonke imigaqo esele ichasene ne-COVID-19 yarhoxiswa ngokusemthethweni elizweni ukusukela namhlanje, isenziwa Dominikha ilizwe lokuqala kwi-European Union (i-EU) ukubuyela ngokupheleleyo kubundlobongela bemihla ngemihla.
Zonke izithintelo ezazinyanzeliswa ngaphambili ngabasemagunyeni baseDenmark, kubandakanya neemfuno zokupasa ze-COVID zokungena kwiiklabhu zasebusuku nakwezinye iindawo, ukuthintela ukuhlanganisana kwabantu abaninzi kunye nokunxitywa kwesigqubuthelo, kususwe, kwiintsuku ezingama-548 emva kokuba iNkulumbuso yaseDenmark uMette Frederiksen ebhengeze ukuvalwa kwakhe ilizwe.
Ngo-Matshi 2020, iDenmark yayiphakathi kwamazwe okuqala ukunyanzelisa amanyathelo anzima okulwa ne-COVID-19.
Beqale ukuvakalisa isigqibo sokushiya imiqathango esemthethweni kwinyanga ephelileyo, abasemagunyeni baseDenmark bathi "lo bhubhane uyalawulwa." Banelungelo lokunyanzelisa amanyathelo “ukuba ubhubhane uphinde wosongela imisebenzi ebalulekileyo eluntwini.”
Ngokwamagosa ezempilo eDenmark, "irekhodi lamazinga aphezulu okugonya" alincede ilizwe labeka umzekelo kwi-European Union kwaye babuyela ebomini kungekho zithintelo zinxulumene ne-COVID. Abemi abathathu kwabane baseDenmark bajonga ukugonyelwa intsholongwane njengomsebenzi woluntu, ngokophando lwe-Eurobarometer olwenziwe kwinyanga ephelileyo egameni lePalamente yaseYurophu.
Kuma-Danes akhethiweyo abameli abayi-1,000 43, ama-31% avumile ngokupheleleyo kwingxelo yokuba wonke umntu kufuneka agonywe, ngelixa i-66% ithe bayavuma. Kuyo yonke i-EU, ipesenti yabantu abavuma ngokupheleleyo okanye ikakhulu kwisiteyitimenti ime kuma-XNUMX.
NgoSeptemba, ngaphezulu kwe-73% yabantu baseDenmark i-5.8 yezigidi zabantu babegonyiwe ngokupheleleyo, ngaphezulu kwe-8.6 yezigidi zeedosi ezichasene ne-COVID ezazilawulwa zizonke. Kuwo wonke lo bhubhane, iDenmark ibhalise ngaphezulu kwama-352,000 amatyala wentsholongwane.
Novemba 10, 2021 kwi-07: 47
Heyi, inqaku elihle, zonke ezi zixhobo zasimahla lukhetho olukhulu olunokunceda amashishini amancinci kodwa isikhokelo sobuchwephesha siyimfuneko kumashishini aqalayo ukuze ukwazi ukunxibelelana nathi. Ngokwenyani, unelungelo lokugxininisa amanyathelo akhethekileyo “ukuba ubhubhani uphinde usongele imisebenzi ebalulekileyo eluntwini.